Dowladda oo ku dhawaaqday howlgal weyn xilli Gobolada dalka ay ka socdaan... - Awdinle Online
Dowladda oo ku dhawaaqday howlgal weyn xilli Gobolada dalka ay ka socdaan…
Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faah faahin guud ka bixisay howlgalalda Ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadaan gobolada dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Cabdi Fitaax Qaasim ayaa sheegay in howlgallada Ciidamada ay isugu jiraan dhowr nooc oo kale ah, howlgallo dhinaca cirka ah oo lagu duqeeyo Xarumaha Al-Shabaab, weeraro toos ah iyo kuwo wadooyinka ay Ciidamada miinooyinka uga saaraan.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in mararka qaar ay howlgallada ka qeyb galaan dowladaha Soomaaliya ka caawiya la-dagaalanka Al-Shabaab, isaga oo sheegay in howlgallada uu kamid ahaa duqeyntii lala beegsaday Idaacadda ku hadasha afka Al-Shabaab ee Alfurqaan.
Ugu dambeyn Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Cabdi fitaaq Qaasim ayaa waxaa uu sheegay in dhamaan gobolada dalka ay ka socdaan howlgalalda, isla markaana uu rajeynayo in degaano dhowr ah laga saaro Al-Shabaab.
Hadalka Wasiirka kuxigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Ciidamada dowladda todobaadyadii la soo dhaafay ay howlgallo ka fuliyeen degaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Jubbooyinka & Shabeellaha Hoose.
Previous articleGuddoomiyaha Aqalka sare oo jawaab ka bixiyay go’aankii Xukuumadda kuna dhawaaqay..
Next articleDEG DEG:- Dagaal culus oo ka socda degmada Walanweyn